Resaky ny mpitsimpona akotry : lany bala | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : lany bala
Ny resaka hono tsy mahavoky hoy ny fitenenana, azafady kely kosa ny kabary anefa tsy maintsy alahatry ny mpitondra mba anaovany tatitra amin’ny vahoaka izay nametraka ny toky aminy sy amelabelarany ny fikasany mikasika ny fanatanterahana ny asa ho amin’ny tanjona nanaovany lokaloka. Eny am-pandroson’ny fanaovan-draharaha dia rariny raha toa mitohy hatrany ny serasera mampifandray ny fitondrana amin’ny mponina, anisan’izany ireny fitsidiha-paritra ataon’ny filoha na minisitra sy ireny fiverenana matetika ataon’ny olom-boafidy toy ny solombavambahoaka any anivon’ny vahoaka monina ao amin’ny faritra nifidy azy.
Raha kely anefa ny zava-bita ny fitenenana anefa tsy maintsy ho raisina dia ny fakam-panahy mikasika fanitarana ny tsy misy no miseho. Matetika hita moa dia ny kely notanterahana no ampitomboana entina aderadera ary lasa mivarina any amin’ny fandokafan-tena ny kabary. Tsy tafiditra ao anatin’izany vovo izany intsony ny olona, manana refy entiny itsarana ny zava-bita izy, efa ela loatra izay namokisana azy rivotra izay nefa ramaka lalandava ny kibony ka ny fahabetsahan’ny vary ao am-biliany no hany hitsarany ny fahombiazan’ny fitondrana na tsia. Iza moa no andeha handanjalanja ny anatin’ny sompitry ny sasany, samy mahafantatra ny fatra kapoaka arotsany ao am-bilaniny. Firy eo ho eo moa no tahan’ny tokantrano izay afaka nampitombo ny fatram-bary mba hampitony ny ambavafon’ny rehetra miray vatsy ao amin’ny ankohonana ? Izay angamba no fomba fametrahana ny fanontaniana rehefa mihaona amin’ny mponina ny mpitondra. Mety vetivety dia ho lany bala eo amin’ny resaka ifanaovana.
Sanatria tsy minia mijery vilana ireo mpitondra, fa noho ny fampiomanana ny fitsidihiny dia ireo zavatra atolotra ho hitany no mahatonga ny fahitany ho diso. Lasa varotra saka beloha no ifanakalozany amin’ny vahoaka, ireto lany andro amin’ny fitehafana izay nanomezana azy baiko ny mpitsidika indray no voafitaka.
Mba ampitomboana ny fanaovana lokaloka andeha mba handramana kely ny fanadihadiana mivantana ny vahoaka, “aiza ny zavatra tsy mandeha, tariho lalana izahay hahita ny toe-draharaha mila fanitsiana”. Iza ireo olona vonona nefa tsy an’asa ? Aiza ny fanitarana tanim-boly izay afaka amokarana ?
Eo amin’izany no ahitana mivantana ny filàna fanaovana fahagagana. Raha ny famoronana asa tsy hita mivaingana, raha tsy misy ny fitombon’ny faritry ny saha azo amokarana, nefa etsy andaniny mitombo ny isan’ny mponina, aiza moa ny lalana ahafahana mampifandanja ny vokatra sy ny filan’ny mponina ? Mihondana amina nofinofy izany fampandrosoana izany.